ရေတိမ်ဒေသများ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း၊ အမျိုးအစားများ၊ ဂေဟစနစ်နှင့် အရေးပါမှု | Green Renewables များ
ကြီးမားသောဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအရေးပါသောဂေဟစနစ်များနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည် စိုစွတ်သော. နှစ်စဉ်ရည်မှန်းချက်မှာ ဤအဖိုးတန်သော သဘာဝဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း လူများအား သတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့ရေတိမ်ဒေသများနေ့ဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာသည် မြေဆီလွှာကို အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် အချိန်အခါအလိုက် ရေဖြင့်မြုပ်နေသည့် ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ ရေချိုဂေဟစနစ်နှင့် အချို့နေရာများတွင် ဆားငန်သောနေရာများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ရေတိမ်ဒေသများ၊ ၎င်းတို့၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ၎င်းတို့၏ အရေးပါပုံများအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
4 Wetlands ၏ဂေဟစနစ်အရေးပါမှု
၎င်းသည် မကြာခဏ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းရေမြုပ်နေသော မြေဆီလွှာများကို အခြေခံ၍ ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ညီသော သဘာဝဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ ဤဂေဟစနစ်များသည် လတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် ဆားငန်ရေရှိသောနေရာများတွင် ပေါ်လာနိုင်သည်။ ယင်းလက္ခဏာများကြောင့် ရေတိမ်ဒေသများသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ပမာဏအများအပြားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်၊ သဘာဝ ကြွယ်ဝမှုကို မညီမျှသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ပေးသည်။
World Wetlands Day သည် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးသောကြောင့် ရေတိမ်ဒေသများ၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးပါသည်။ စိုစွတ်သောမြေများသည် သဘာဝ သို့မဟုတ် လူလုပ်နိုင်သည်။ အချို့သော သဘာဝရေတိမ်ဒေသ အမျိုးအစားများသည် စိမ့်စိမ့်များ၊ အချို့သော စိမ့်မြေများနှင့် ၎င်းတို့၏ မြစ်ကြောင်း ဧရိယာများ၊ မြေဆွေးမြေများ စသည်တို့သို့ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အတုအယောင် ဖန်တီးထားသော သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းထားသော ရေတိမ်ဒေသများကို ကြည့်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ခွင့်ပြုထားသရွေ့ ၎င်းတို့သည် အစိုဓာတ်ကို ယာယီနှင့် အမြဲတမ်း အတုအယောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤဆောက်လုပ်ထားသောစိုစွတ်သောlandsရိယာများကိုမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများကာကွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်သဘာဝကာကွယ်မှုတန်ဖိုးကိုဖြန့်ဝေရာတွင်အသုံးပြုသည်။
ဤရေတိမ်ဒေသများသည် အလွန်ပေါများသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သဘာဝကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော ကိရိယာများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောမြေအမျိုးအစားများ ကွဲပြားကြပြီး ၎င်းတို့ကို ထူထပ်စေသော ရေအမျိုးအစားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့် အခြားလက္ခဏာများအလိုက် ခွဲခြားထားသည်။ စိုစွတ်သောမြေအမျိုးအစားများအကြား အဓိကကွာခြားချက်မှာ ရေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ရေချို စိမ့်မြေများနှင့် ရေငန်စိမ့်မြေများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ သဘာဝရေတိမ်ဒေသများနှင့် လူလုပ်ရေတိမ်ဒေသများကို ခွဲခြားနိုင်သည်။
ဤအစိုစွတ်သောမြေများသည်အလွန်ကြွယ်ဝသောကြောင့်သူတို့သည်သဘာဝကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသောကိရိယာများဖြစ်လာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစိုစွတ်သောမြေအမျိုးအစားများရှိပြီး၎င်းတို့ကိုဖွဲ့စည်းထားသောရေအမျိုးအစားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အခြားလက္ခဏာများအရခွဲခြားထားသည်။ စိမ့်မြေအမျိုးအစားများနှင့်အဓိကကွာခြားချက်မှာရေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုစိုစွတ်သောမြေများနှင့်ဆားငန်စိမ့်မြေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းသဘာဝကစိုစွတ်သောနှင့်လူလုပ်စိမ့်မြေကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fluvial wetland: သဘာဝဝိသေသလက္ခဏာများ နှင့် ရေချိုအမျိုးအစားများရှိသော ရေတိမ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို များသောအားဖြင့် မြစ်များ၊ ချောင်းများနှင့် ရေတံခွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ရေစိုစွတ်ရေကန်: ၎င်းတို့သည် ရေကန်များနှင့် သဘာဝရေချို ရေကန်များမှတစ်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အပူပိုင်းဒေသ palustres: စမ်းရေတွင်းငယ်များ၊ အိုအေ့များ၊ ရေလွှမ်းလွင်ပြင်များ၊ စိမ့်သစ်တောများ၊ စိမ့်များနှင့် အမှိုက်များပါရှိသော ဧရိယာများ ပါဝင်သည်။ ဤရေတိမ်ဒေသများ၏ အဓိကလက္ခဏာမှာ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် သဘာဝရင်းမြစ်များရှိပြီး ရေသည် လတ်ဆတ်သည်။
အဏ္ဏဝါစိုစွတ်သော နာမတော်၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်သဘာဝစိုစွတ်သောareရိယာများဖြစ်သော်လည်းဆားငန်ရေများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်းရှိကမ်းခြေပတ်ဝန်းကျင်များ၌တွေ့ရသည်။ ဥပမာကျောက်တုံးများ၊ သဲသောင်ပြင်များနှင့်ကျောက်စရစ်အချို့သောဒေသများ။
အတု: ၄ င်းတို့မှာရေလုပ်သားများအားရေကိုသိုလှောင်ရန် (သို့) ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ လူ၏လုပ်ရပ်များမှထုတ်ယူသောထိုစိုစွတ်သောမြေများဖြစ်သည်။ ဒီမှာရေလှောင်ကန်နှင့်ဆည်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသောသစ်ပင်ပန်းမန်နှင့်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
Estuaries: မြစ်များစွာသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပါးစပ်များနှင့်မြစ်ရေအချို့ကိုမထုတ်မီမြစ်ဝများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၄ င်းတို့၏အဓိကလက္ခဏာမှာ ၄ င်းတို့သည်မြစ်ဝများမှငန်ငန်သောရေများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သဘာဝဇာစ်မြစ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ဆားငန်ရွှံ့သို့မဟုတ်ဒီရေတောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဆားငန်အိုင်စိမ့်မြေ: ၎င်းသည်ယခင်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်တွေ့ရသောကြောင့်ကန်များနှင့်ရေကန်နှစ်ခုလုံးသည်ဆားငံရေများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစသဘာဝဇာစ်မြစ်ရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဂေဟစနစ်များသည် မိုးတိမ်ဒေသများအဖြစ် ၎င်းတို့၏အခြေခံအတွက် အခြေအနေနှင့် လက္ခဏာအချို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည် အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်-
ရေတိမ်ဒေသများသည် ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ကုန်းနေဂေဟစနစ်များကြားတွင် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာသော အကူးအပြောင်းဒေသများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံး၏ လက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရောနှောထားသော ဂေဟစနစ်များအဖြစ် သတ်မှတ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ကုန်းနေဂေဟစနစ်များကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြပြီး အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းမှလည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ရေတိမ်ဒေသများသည် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်၏ ပုံမှန်လက္ခဏာများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်၏ ပို၍ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ယာယီနှင့် အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သော ရေလွှမ်းမိုးဇုန်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် မုန်တိုင်းငယ်များ နှင့် မိုးများသော အခါတွင် အလွယ်တကူ ရေလွှမ်းမိုးနိုင်သော နေရာများတွင် ခေတ္တ ပေါ်လာတတ်သည်။
စိုစွတ်သောရေသည် ရေစီးရေလာ အလွန်အကျွံမတတ်နိုင်သောကြောင့် ငြိမ်သောရေဖြစ်ရမည်။ ၎င်းတို့တွင် သေးငယ်သော ရေစီးကြောင်းများသာ ရှိနိုင်ပြီး လတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် ဆားငန်ရေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အချို့သော အနက်ရှိုင်းသော သမုဒ္ဒရာငယ်များ လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ဒီရေသက်ရောက်မှုဟာ များသောအားဖြင့် သိပ်ပြီးမမြင့်ပါဘူး။. သာမာန်အရှိဆုံးအရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကွာခြားချက်6မီတာထက်မပိုပါ။
မြေဆီလွှာ၏ နယ်နိမိတ်ကို များသောအားဖြင့် မြေပြင်တစ်ခုစီတွင် တည်ရှိသော အပင်အမျိုးအစားဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ထင်ရှားသော အသီးအရွက်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ရေတွင် ကောင်းစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလေ့ရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်မဟုတ်သော စိုစွတ်သောမြေ၏ နယ်နိမိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော အသီးအရွက်များအကြား ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် ဂေဟစနစ်တစ်ခု ကုန်ဆုံးပြီး အခြားတစ်ခုသည် ကုန်းနေဂေဟစနစ်၏ ပုံမှန်လက္ခဏာများဖြင့် စတင်သည်။
စိုစွတ်သောမြေများသည် မျိုးစိတ်များစွာအတွက် စံပြနေရပ်များဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းငှက်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေတိမ်ဒေသများတွင် ကျက်စားနိုင်ပြီး အနားယူနိုင်သောကြောင့် ကြီးစိုးသည်။ ဆောင်းခိုပြီး ငယ်ရွယ်သူများလည်း ရှိကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်အများအပြားကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ၊ ငါးများနှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ။
ရေတိမ်ဒေသများသည် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက် အကာအကွယ်ပေးထားသော ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သဘာဝ၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ အများအပြားကို သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ရေကိုမှီခိုသောအပင်များ ပေါက်ဖွားလာသည်။ ထို့အပြင် လူ့တန်ဖိုးကို ပေါင်းထည့်ရမည်။ ရေတိမ်ဒေသများသည် စပါးသီးနှံများကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရန် ရေအမြောက်အမြား လိုအပ်သည့် အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဧရိယာများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
အခြားအချက်များသည် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းထားနိုင်စေရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မျက်နှာပြင်နှင့် ရေတိမ်ပိုင်းများ အပါအဝင် ဇလဗေဒ လည်ပတ်မှု စည်းမျဉ်း။ စိုစွတ်သောမြေများသည် မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အာဟာရဓာတ်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းညှိရာတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်နေပါသည်။ ဤအရာများသည် ရေတိမ်ဒေသအများစုတွင် သဘာဝဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်ပေးရေးစနစ် ရှိနေရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » စိမ့်မြေ